Psalmen 35 HTB - Nnwom 35 ASCB
1Ao Awurade wo ne wɔn a wɔne me di asie no nni asie;
2Fa wʼakokyɛm ne wo nkatanimu;
3Twe pea ne abonnua
wɔ wɔn a wɔtaa me so
ka kyerɛ me kra sɛ,
4Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔkum me no
wɔn a wɔbɔ me sɛeɛ ho pɔ no
ma wɔmfa aniwuo nsane wɔn akyi.
5Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ guo
wɔn a Awurade ɔbɔfoɔ repam wɔn.
6Ma wɔn akwan so nnuru sum na ɛso nyɛ toro,
na Awurade ɔbɔfoɔ ntaa wɔn so.
7Esiane sɛ wɔde atena sum me afidie kwa
na wɔtuu amena maa me a menyɛɛ wɔn hwee no enti
8ma ɔsɛeɛ mmɛfu wɔn mu
na atena no a wɔde hintaaeɛ nyi wɔn,
na ma wɔnhwe amena no mu nsɛe.
9Afei me kra ani bɛgye wɔ Awurade mu
na wasɛpɛ ne ho wɔ ne nkwagyeɛ mu.
10Me onipadua nyinaa bɛteam aka sɛ,
“Hwan na ɔte sɛ wo, Ao Awurade?
Wogye ohiani firi ahoɔdenfoɔ nsam
ne deɛ ɔnnibie firi apoobɔfoɔ nsam.”
wɔbisa me nneɛma a mennim ho hwee ho asɛm.
13Nanso, ɛberɛ a wɔyareeɛ no, mefiraa ayitoma
na mede akɔnkyene brɛɛ me ho ase.
Ɛberɛ a me mpaeɛbɔ ho mmuaeɛ nnya mmaeɛ no,
14mekɔɔ so twaa adwo
sɛdeɛ meyɛ ma mʼadamfo anaa onuabarima.
Mede awerɛhoɔ sii me ti ase
te sɛ deɛ meregyam me maame.
15Nanso, ɛberɛ a mesuntiiɛ no, wɔde anigyeɛ boaa wɔn ho ano;
ntohyɛsofoɔ twaa me ho hyiaaɛ a mennim
na wɔdii me ho nsekuro a wɔantwa so da.
16Wɔde adwemmɔne dii me ho fɛ te sɛ nnipa a wɔnni nyamesu;
17Ao Awurade, wobɛhwɛ wɔn akɔsi da bɛn?
Gye me nkwa firi wɔn sɛeɛ mu,
gye me nkwa a ɛsom bo no firi saa agyata yi nsam.
18Na mɛda wo ase wɔ dwabɔ kɛseɛ ase;
wɔ nnipa dodoɔ mu na mɛkamfo woɔ.
19Mma mʼatamfoɔ a wɔtane me kwa no
nhwɛ me haa nsere.
Mma wɔn a menyɛɛ wɔn hwee nso wɔtane me no
mmfa adwene bɔne mmu me anikyeɛ.
20Wɔnnkasa asomdwoeɛ so,
na mmom, wɔde ntwatosoɔ
21Wɔhwɛ me haa ka sɛ, “Aane! Aane,
yɛde yɛn ankasa ani ahunu.”
22Ao Awurade, wahunu na mmua wʼano.
Nte wo ho nkɔ akyiri, Ao Awurade.
23Nyane, sɔre na bɛbɔ me ho ban!
Ka bi ma me, me Onyankopɔn ne mʼAwurade.
24Di mʼasɛm ma me wɔ wo tenenee no mu, Ao Awurade me Onyankopɔn;
mma wɔn nhwɛ me haa nsere.
25Mma wɔnnwene nka sɛ, “Aane, deɛ yɛpɛ ni!”
anaa wɔnnka sɛ, “Yɛanya no.”
26Ma wɔn a wɔhwɛ me haa sere me wɔ mʼahohiahia mu no
ma wɔn a wɔdi me so akokurokosɛm no
nhyɛ aniwuo ne animguaseɛ atadeɛ.
27Ma wɔn a wɔdi ahurisie wɔ me bembuo ho no
mfa anigyeɛ ne ahosɛpɛ nteam
ɛberɛ nyinaa mu ma wɔnka sɛ, “Momma Awurade so,
ɔno na nʼani gye ne ɔsomfoɔ yiedie ho.”
28Me tɛkrɛma bɛka wo tenenee
ne wʼayɛyie da mu nyinaa.
ASCB : Nnwom 35